“Rajadayda Ugu Weyn Waa Inaan Barcelona Tababare Ka Noqdo” –
Halyeygii Barcelona ee Xavi Hernandez ayaa daboolka ka qaaday in isaga iyo gacan yareyaashiisuba ay isku diyaarinayaan sidii ay u qaban lahaayeen shaqada tababarenimada Barcelona, halkaas oo uu ugu laabanayo inuu macallin ka noqdo kooxda koowaad.
Xavi oo hadda ah tababara kooxda Al-Sadd waxa shaqada Barcelona lala xidhiidhiyey horraantii sannadkan markii ay kooxdaasi go’aansatay inay caydhiso Ernesto Valverde, laakiin Xavi ayaa waqtigaas ka gaws adaygay isaga oo ku dooday inay waqti ku noqonayso inuu layliyo kooxdiisa hore, taasina waxay keentay in bishii January la magacaabo Quique Setien.
Laakiin 40 jirkan waxa uu qirtay in waqtigan ay isaga iyo kaaliyeyaashiisuba isku diyaarinayaan inay Barcelona u safraan.
Hadalkan oo kusoo beegmaya waqti ay Blaugrana ku jirto xaalad adag oo laba dhibcood ay hoggaanka horyaalka kagala wareegtay Real Madrid, isla markaana markaana ay soo baxeen in Sabtidii ay ciyaartoyga kooxdu si cad u canaanteen macallinka, ayaanu Xavi cayimin xilliga uu qorshihiisu yahay inuu ku laabto Camp Nou.
“Rajada ugu weyn ee aan waqtigan leeyahay waa inaan noqdo tababara Barca, aanan Barca kusoo celiyo dariiqa guusha.” Ayuu yidhi Xavi oo u warramay wargeyska Sport, isla markaana Al-Sadd la qaaday Qatari Super Cup iyo Qatar Cup.
“Aniga maaha, laakiin ciyaartoydan iyo Barca ayaa guuleysanaya. Sidaas darteedna, shaqaalahayaga farsamada ayaa in badan isku diyaarinaya, dhab ahaantiina way i farxad gelinaysaa.” Ayuu raaciyey.
Xavi oo cimrigiisa ciyaareed ku qaatay Barcelona ka hor intii aanu xilli dambe tegin Carabta oo uu waqti kooban kasii ciyaaray, waxa kooxda reer Catalonia la qaaday 25 koob, waxaanu isku yaqaanaa nin kooxeed oo kali ku ah Barcelona.
“Anigu waxaan ahay nin kooxeed, waxaanan jecelahay inaan ku laabto waqtiga ku habboon oo aan mashruuca kasoo bilaabo seeska. Marar badan ayaan sheegay, balse waxaan doonayaa inaan qaato go’aamo kubadda cagta ah oo Barcelona ah.” Ayuu ku daray.
Intaa kaddib, waxa uu Xavi ishaaray waqtiga uu qorshihiisu yahay inuu Barcelona ku laabto, waxaanu yidhi: “Way iska caddahay in doorashada kaddib, fagaaraha la habayn doono. Anigu waxba meesha kama saarayo.
“Bishii January ayay ii yimaaddeen, waanu wada-hadalnay. Waxaan u sheegay in duruufaha iyo waqtiguba aanay ahayn kuwii ku habboonaa.”
Doorashada madaxtinimada ee Barcelona ayaa dhici doonta xagaaga 2021, taas oo ka dhigan in sannad buuxaa ka hadhsan yahay, waxaana la ogyahay in Josep Marria Bartomeu oo waqtigan kooxda madaxweyne ka ah inaanu u tartami doonin.